१५ असार २०७५, शुक्रबार २१:१८१५ असार २०७५, शुक्रबार २१:१८१५ असार २०७५, शुक्रबार २१:१८ by abbythomason07No Comments
यसरी हिलोमा पसे प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रि शंकर पोखरेल
१५ असार २०७५, शुक्रबार २१:१८ 29/06/2018 by abbythomason07
दाङ । सधैं सुटेटबुटेट भएर चिल्लो गाडी चढेर प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल धाउने मुख्यमन्त्रि शंकर पोखरेलको हुलिया शुक्रबार फरक थियो । सधैं सुकिलो मुकिलो भएर हिँड्ने मुख्यमन्त्रि पोखेरल सामान्य टिसर्ट र पाइन्टमा मात्र थिए । यो देख्दा सबैलाई आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविक नै थियो । मुख्यमन्त्री पो
८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार २०:३५८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार २०:३५८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार २०:३५ by abbythomason07No Comments
काठमाडौँ । ३३ किलो सुन काण्डाका मुख्य अभियुक्त भनिएका चुडामणि उप्रेती उर्फ ‘गोरे’ यो काण्डको मुख्य नाइके हुन नसक्ने टिका टिप्पणि सामाजिक संजालाहरुमा हुन थालेको छ। भारत बाट पक्राउ गरि काठ्माण्डौमा आज पत्रकार सम्मेलनका बीच सार्वजानिक गरे लगत्तै सामाजिक संजालाहरुमा यस्तो बहस हुन थालेको हो। जसरि बोस,
७ जेष्ठ २०७५, सोमबार २०:३२७ जेष्ठ २०७५, सोमबार २०:३२७ जेष्ठ २०७५, सोमबार २०:३२ by abbythomason07No Comments
काठमाडौँँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएकाे छ । एकल बहुमत सहितको कम्युनिस्ट सरकारले सम्वृद्धिका योजना समेटेर आगामी दिनमा गर्ने कामहरुको क्यालेन्डरसहित आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।सोमबार वाम गठबन्धनको चुनावी घो
७ जेष्ठ २०७५, सोमबार १६:५१७ जेष्ठ २०७५, सोमबार १६:५१७ जेष्ठ २०७५, सोमबार १६:५१ by abbythomason07No Comments
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै (लाइभ)
७ जेष्ठ २०७५, सोमबार १६:५१ 21/05/2018 by abbythomason07
काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा सोमबार प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदको दुवै सदको स‌ंयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकी हुन् । ﻿
२४ बैशाख २०७५, सोमबार २०:४०२४ बैशाख २०७५, सोमबार २०:४०२४ बैशाख २०७५, सोमबार २०:४० by abbythomason07No Comments
मोदीलाई अभिनन्दन गर्न यस्तो बन्दैछ काठमाडौँ महानगर (फोटो फिचर)
२४ बैशाख २०७५, सोमबार २०:४० 07/05/2018 by abbythomason07
काठमाडौं । शुक्रबार काठमाडौं आउँदै गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले नागरिक अभिनन्दन गर्ने भएको छ । शनिबार दिउँसो दुई पैंतालिसमा भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन गरिने कार्यक्रम तय भएको छ । यसका लागि सम्पूर्ण तयारी करिब पुरा भइसकेको महानग
२७ चैत्र २०७४, मंगलवार २३:०५२७ चैत्र २०७४, मंगलवार २३:०५२७ चैत्र २०७४, मंगलवार २३:०५ by abbythomason07No Comments
अर्काे घुस काण्ड, हामीलाई समेत यसरी गरियो घुस दिने प्रयास ! (भिडियो सहित)
२७ चैत्र २०७४, मंगलवार २३:०५ 10/04/2018 by abbythomason07
काठमाण्डौ । निजि स्कुलको भर्ना शुल्कले अविभावहरुको डाड भाँच्दै छ । कतिपय विद्यालयको मनोमानी यस्तो छ कि १ कक्षाको भर्ना शुल्क नै २ लाख । सरकारी बिद्यालयको शैक्षिक स्तर सबैलाई थाहा छ । केही अपवादलाई छोडेर सरकारी स्कुलका प्रोडक्टहरु ग्लोबल कम्पिटिशनमा टिक्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारी शिक्षालयहरमा न श
१८ चैत्र २०७४, आईतवार ०७:०५१८ चैत्र २०७४, आईतवार ०७:०५१८ चैत्र २०७४, आईतवार ०७:०५ by abbythomason07No Comments
के हो अप्रिल फुल ? कसरी मनाउन थालियो ? यस्तो छ अप्रिल फुलको कहानी
१८ चैत्र २०७४, आईतवार ०७:०५ 01/04/2018 by abbythomason07
दाङ, चैत १८ ।अप्रिल महिनाको पहिलो दिन अर्थात अप्रिल १ लाई संसारका धेरै मुलुकमा मुर्ख दिवस मान्ने गरिन्छ। यद्यपी यो दिवस संसारको कुनै पनि मुलुकले औपचारिक रुपमा भने मनाउँदैनन्। यो दिन एक अर्कालाई हानी नपुग्ने गरि मात्र रमाइलोको लागि एकछिनलाई मुर्ख बनाएर मनाइन्छ यसलाई एक किसिमको मजाक गर्ने दिनको रुपमा
१७ चैत्र २०७४, शनिबार १८:२८१७ चैत्र २०७४, शनिबार १८:२८१७ चैत्र २०७४, शनिबार १८:२८ by abbythomason07No Comments
विरोधीले त भनेकै थिए, कम्युनिष्ट सरकार आए हाँस्न त के रुन पनि पाईंदैन । तर विरोधीका कुरा कसैले सुनेनन् । ड्याम कि ड्याम सूर्य र गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा छाप लगाएर कम्युनिष्टलाई चुनाव जिताइदिए । तिनै कम्युनिष्टहरुले मिलेर अहिले सरकार बनाएका छन् । कसैले चाहेर पनि हल्लाउन नसक्ने बलियो सरकार । ध
१५ चैत्र २०७४, बिहीबार २०:५११५ चैत्र २०७४, बिहीबार २०:५११५ चैत्र २०७४, बिहीबार २०:५१ by abbythomason07No Comments
यस्तो देखियो शाहीकाल सम्झाउने राष्ट्रपतिको सवारी (फोटो फिचर)
१५ चैत्र २०७४, बिहीबार २०:५१ 30/03/2018 by abbythomason07
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रस्थित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन भएको छ । निर्वाचनपछि आज दुवै सदनको पहिलो ऐतिहासिक बैठकलाई उनले सम्बोधन गरेकी हुन् । बैठक शुरु भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपति भ
४ चैत्र २०७४, आईतवार १४:१८४ चैत्र २०७४, आईतवार १४:१८४ चैत्र २०७४, आईतवार १४:१८ by abbythomason07No Comments
यस्तो हुन सक्छ प्रदेश ५ को नाम र यो ठाउँमा हुन सक्छ स्थायी राजधानी
४ चैत्र २०७४, आईतवार १४:१८ 18/03/2018 by abbythomason07
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको धेरै दिन भइसकेपछि अन्य ६ वटा प्रदेशसभामा पनि बहस शुरु भएको छ । शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनावपछि प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्न नपाउँदै ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन भएका थिए । राजधानीका लागि जस्तो आन्दोलन प्रदेशको नामका ल